तिहारको पुर्वसन्ध्यामा आयो रानीको ‘चियाबारीमा’ (भिडियो) | filmyinfo.com
नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा निरन्तर लागिरहनु भएकी गायिका डा. रानी शाक्यको सुमधुर स्वर रहेको नयाँ गीत ‘चियाबारीमा’ को म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । तिहारको शुभकामना सहित सार्वजनिक गीतमा विकाश चौधरीको संगीत र संजय हमालको एरेन्ज रहेको छ । इलामको रमाइलो चियाबारीमा छायांकन गरिएको भिडियोमा रविना प्रधान, सन्तु थापा मगर, भुपाल बुढाथोकी र बिक्रम धिमाल अभिनय रहेको छ ।
ज्ञानु राईको सिनेमाटोग्राफी, सुवाश लिम्बुको सम्पादन रहेको भिडियोलाई उषा मलाहा “सिम्रन”ले निर्देशन गरेकी हुन्। गायिका शाक्यको आफ्नै युट्युब च्यानल मार्फत सार्वजनिक गरिएको गीतमा हरि उप्रेतीको शब्द रहेको छ । गायिका डा. शाक्यले यसअघिका गीतहरुलाई जस्तै माया गरिदिन सम्पूर्ण दर्शक, स्रोता र मिडिया हाउसलाई आग्रह गरेकी छिन ।
हाल अमेरिकाको मेरिल्याण्डमा रहेकी गायिका शाक्यको अहिले सम्म ४० वटा भन्दा बढी गीतहरु आइसकेका छन। आधुनिक, डान्सिङ गीत, लभ भर्सनका गीतहरुको साथै चलचित्रको पार्श्व गायनमा समेत आफुलाई अब्बल सावित बनाइसकेकी छिन ।